နမ်အိုမြစ် - ဝီကီပီးဒီးယား
လာအိုအတွက် အရေးပါသော သယ်ပို့လမ်းကြီး
နမ်အို (လာအို: ນ້ ຳອູ [nâːm ùː] စပါးကျီ) သည် လာအိုနိုင်ငံ၏ အရေးပါသောမြစ် ဖြစ်သည်။ ၄၄၈ ကီလိုမီတာ ရှည်ပြီး မဲခေါင်မြစ်၏ မြစ်လက်တက်များအနက် အရှည်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဖုံဆလီပြည်နယ် အရှေ့မြောက်ဘက်၊ မောင်အိုနာအရပ် (တရုတ်နယ်စပ်) မှ ဘန်ပအို့ (လောင်ဖရာဘွမ်မြို့အထက် ၁၅ မိုင်အကွာ) သို့ စီးလာကာ မဲခေါင်မြစ်အတွင်း ဝင်သည်။ မဲခေါင်မြစ်နည်းတူ နမ်အိုသည်လည်း ရေယာဉ်ကြီးများအတွက် သင့်လျော်သည့်ရေလမ်း ဖြစ်သည်။
မဲခေါင်မြစ်နှင့် ကပ်နေသော ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပအို့ဂူများအတွင်းမှ လက်ရာမြောက်သော ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များသည်လည်း ထင်ရှားသည်။
မြစ်ရေသောက်လယ်များကို မဲခေါင်မြစ်နှင့် ဆက်နေသည့် မြစ်ခြေပိုင်းတွင် အများဆုံး တွေ့ရသည်။
အောက်ပါမြို့ရွာများမှာ နမ်အိုမြစ်ဘေးမှ ခရီးသွားတို့အကြိုက် လူသိများနေရာများ ဖြစ်သည် -
နမ်အိုမြစ်၏ မြစ်ညာတွင် ရှိပြီး ရေလမ်းဖြင့်သွားနိုင်သော အစွန်ဆုံးနေရာ ဖြစ်သည်။ လန်တိုင်ရွာ (Lan Tui / Ban Xieng Siew) မှတဆင့် ဖိုဒိုင်တော (Phou Doi) နေ ဆဲလာတိုင်းရင်းသား (Cela) တို့ လူနေမှုကို လေ့လာနိုင်သည်။
ဖုံဆလီမြို့ (Phongsali) သည် လောင်ဖရာဘွမ်နှင့် ဗီယန်ကျင်းတို့ထံ ကားလမ်းပေါက်သော မြို့ဖြစ်ပြီး လေဆိပ်လည်း ရှိသည်။ တရုတ်နယ်စပ်ဖြစ်၍ တရုတ်ခရီးသွားတို့အတွက် တံခါးမ ဖြစ်သည်။ ဖုံဆလီမှ နွမ်ခီအောသို့ ရေလမ်းနှင့်သွားသော မြစ်ကြောင်းခရီးကို လူကြိုက်များသည်။
မောင်ခွါးမြို့ (Muang Khua) သည် ဗီယက်နမ်မှ ဒန်ဘန်ဖူးမြို့ (Dien Bien Phu) နှင့် လမ်းပေါက်သည့်အတွက် ဗီယက်နမ်မှ လှည့်လာသော ခရီးသွားတို့ ဦးတိုက်ရာနေရာ ဖြစ်လာသည်။ တည်းခိုခန်း၊ ဟိုတယ်များ ရှိသည်။ မြို့အနီးတွင် ရိုးရာဓလေ့အတိုင်း နေထိုင်ကြသော ကျေးရွာ များစွာ ရှိသည်။
မောင်ငိုင်ရွာ (Muang Ngoi) သည် သောင်ပြင်ကျယ်ပြီး လှေဆိပ်ရှိသော ရွာဖြစ်သည်။ တည်းခိုခန်းငယ်သာ ရှိသော်လည်း အချို့ခရီးသွားများက ထိုရွာ၌ တညအိပ်တတ်ကြသည်။ ဗီယက်နမ်နှင့် စစ်ပွဲတွင် ဗုံးကျဲခံအရပ်တွင် ပါ၍ ဗုံးဆံနှင့်လုပ်သော ပန်းအိုး၊ ကုလားထိုင်၊ လမ်းညွှန်တိုင် စသော အသုံးအဆောင်များကို အဆန်းတကြယ် တွေ့နိုင်သည်။
နွမ်ခီအောမြို့ (Nong Khiaw) သည် ခရီးသွားအများစု တည်းခိုသော နေရာဖြစ်သည်။ ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်း၊ စားသောက်ဆိုင်များ ပေါများသည်။ ရှုရပ်ရှိပြီး တငြိမ်ငြိမ်စီးနေသော နမ်အိုမြစ်အလှကို ကြည့်နိုင်သည်။
နွမ်ကူနှင့် လောင်ဖရာဘွမ်ပို့သော ကူးတို့
၂၀၁၁ ခု၌ နမ်အိုမြစ်ပေါ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံတန် ဆည်တခုဆောက်ရန် စီမံကိန်းအား လက်မှတ်ထိုးနိုင်ခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံမှ စိနိုဟိုက်ဒရိုကုမ္ပဏီက ကြေညာသည်။
အကြမ်းဖျဉ်းကြေညာချက်အရ ၂၀၁၈ ခုအပြီး တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ပြီး ဆောက်ရောင်းလွှဲစနစ် (B.O.T.) ဖြင့် သွားကာ ၂၀၂၆ ခုတွင် လာအိုသို့ လွှဲပေးမည်ဟု သိရသည်။ 
စိနိုဟိုက်ဒရိုသည် ၂၀၀၉ ခုကလည်း နမ်ခုံမြစ်ပေါ်တွင် ဆည် ၂ ခုဆောက်ရန် အခွင့်ရခဲ့သည်။  ဤဆည်ပြီးပါကလည်း နမ်အိုမြစ်ပေါ်တွင် နောက် ၄ ခုဆောက်ရန် သဘောတူညီမှု ရထားပြီဖြစ်သည်။ 
ဆည်ဧရိယာနှင့် ရေလွှမ်းမည့်ဧရိယာတွင် ပါသော ကျေးရွာများကို ရွေ့ပြောင်းစေခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုဆည်ကြောင့် လာအိုမြောက်ဘက်စွန်းရှိ ဖိုးတံတင်း (Phou Den Din) တောင်တန်းသို့ သွားနိုင်မည် မဟုတ်တော့။ အမျိုးသားဇီဝမျိုးကွဲစောင့်ရှောက်တော (National Biodiversity Conservation Area) ရှိသော ထိုတောင်တန်းတွင် အာရှဆင်၊ ကျား၊ ဝက်ဝံနက်၊ ခြင်္သေ့ စသော ရှားပါးတိရိစ္ဆာန်များ ကျက်စားရာဖြစ်သည်။ ထိုတောင်တန်းသို့ အဓိကသွားလမ်းမှာ နမ်အိုမြစ်ပေါ်ရှိ ရေလမ်းမှ ဖြစ်၍ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း ထောက်ပြသူများလည်း ရှိသည်။ မြစ်အတွင်းရှိ ငါးမျိုးစိတ် ၈၄ မျိုးတို့ လျော့ပါးနိုင်ခြေလည်း ရှိသည်။
၂၀၁၈ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်တွင် ရှီနမ်နွိုင်မြစ် (Xe Namnoy) ပေါ်မှ ဆည်ကျိုးကာ အတ္တပူရ် (Attapeu) ပြည်နယ်တွင် ရေလွှမ်းသည်။ လူ ၁၉ ယောက်သေပြီး ရာနှင့်ချီ ပျောက်ဆုံးသည်။  ထိုဖြစ်ရပ်ပြီးနောက် နမ်အိုမြစ်ပေါ်မှ ဆောက်လက်စ စီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်သူများ ရှိလာသည်။
နမ်အိုမြစ်တွင် ဆောက်နေသော ဆည်လုပ်ငန်းခွင်
↑ ၁.၀ ၁.၁ Shannon Tiezzi (2 Aug 2018) "China and Laos' Dam Disaster". The Diplomat.
↑ (18 Aug 2009) "Sinohydro Signs Deal to Build2Hydro Plants in Laos". Hydro Review.
↑ (11 Aug 2018) "The Collapse of Xe-Pian Xe-Namnoy Hydropower Project, Lao PDR". Environmental Justice Atlas.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နမ်အိုမြစ်&oldid=492948" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၀:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။